Online Info - Page 107 of 115 - Thutayatha
May 19, 2020 Bee News 0
May 18, 2020 Bee News 0
မြင်တွေ့နေကြအရာဝတ္ထုများကို ထက်ခြမ်းခွဲလိုက်တဲ့အခါ ဖြစ်ပေါ်လာမယ့်မြင်ကွင်းများ
ပုံမှန်အားဖြင့် ကျနော်တို့နေ့စဉ်အသုံးပြုနေသော အရာဝတ္ထုများ၊ပစ္စည်းများရဲ့ အတွင်း၌ ဘယ်လိုပုံသဏ္ဍာန်ရှိနေမယ်လို့ သင်စဉ်းစားဖူးပါသလား? ထိုအရာဝတ္ထုများရဲ့အတွင်းပိုင်းမှာ ပုံမှန်မြင်နေကျမဟုတ်သော လျှို့ဝှက်အစိတ်အပိုင်းများရှိမယ်လို့ သင်ယူဆမိပါသလား? ဓါး သို့မဟုတ် ကတ်ကြေးကိုအသုံးပြုပြီးတော့ သင့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့ အရာဝတ္ထုများကိုလဲ လေ့လာလို့ရနိုင်ပါတယ်။ ( အကုန်လုံးကိုဖျက်စီးပစ်ရမယ်လို့ မဆိုလိုပါဘူး ) ယခုဖေါ်ပြပေးမှာကတော့ ကျနော်တို့မြင်နေကြဖြစ်တဲ့ အချို့သောအရာဝတ္ထု ပစ္စည်းများရဲ့ အတွင်းပိုင်း […]
၂ ခါပြန်ကြည့်ရမယ့်အထိ အမြင်အာရုံကို လှည့်စားနိုင်လွန်းတဲ့ ဓာတ်ပုံများ
May 17, 2020 Bee News 0
ဓါတ်ပုံပညာရဲ့လှည့်စားနိုင်စွမ်းကိုတော့ ကျနော်တို့သိရှိပြီးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ရိုက်ရတဲ့ ရှုထောင့်၊အချိန်၊ပတ်ဝန်းကျင်အနေအထားက ဓါတ်ပုံကောင်းတစ်ပုံအတွက် အရမ်းအရေးကြီးတဲ့ လိုအပ်ချက်တွေဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ခါတစ်လေမှာ ကျနော်တို့ရိုက်လိုက်တဲ့ ပုံတွေဟာ ကိုထင်ထားသလိုဖြစ်မလာတတ်ပေမဲ့ မထင်မှတ်ထားတဲ့ပုံတွေကလဲ ထူးခြားတဲ့မြင်ကွင်းကိုပြောင်းလဲနေတတ်ပါတယ်။ယခုဖေါ်ပြပေးမှာကတော့ မြင်ရတဲ့ ကိုယ့်မျက်လုံးကိုတောင် မယုံကြည်နိုင်ပဲ ၂ ခါပြန်ကြည့်ရမယ့်အထိ အမြင်အာရုံကို လှည့်စားနိုင်လွန်းတဲ့ ဓာတ်ပုံများဘဲဖြစ်ပါတယ်။ ၁။ ထူးဆန်းလူသား ၂။ ကြောင်လေးရဲ့ မျက်လှည့်ပြကွက် […]
May 16, 2020 Bee News 0
သင့်အနေနဲ့ လေယာဉ် အလကားစီးဖို့ အခွင့်အရေးရမယ်ဆိုရင် စီးမှာလား?များသောအားဖြင့် လူအများကတော့ လိုက်စီးကြမှပါ။ ဘာလို့ဆို ယနေ့ခေတ်မှာ လေယာဉ်စီးခတွေက အရမ်းကိုဈေးကြီးလွန်းတာကြောင့်ပါ။ နိုင်ဂျီးယားနိုင်ငံ လာဂိုမှ အမျိုးသားတစ်ဦးကတော့ လေယာဉ်အလကားစီးနိုင်ဖို့အတွက် လေယာဉ်တောင်ပံကို ဖက်တွယ်တက်ကာ လေယာဉ်အင်ဂျင်အုံမှ တစ်ဆင့် လေယာဉ်ထဲကို ဝင်ရောက်နိုင်ဖို့ ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။ ထိုကို့ရို့ကားယားနိုင်လှသော အဖြစ်ပျက်ကတော့ မူတလာ […]
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်ကြောင့် ပိတ်ထားရတဲ့ မလေးရှားမှ ရုပ်ရှင်ရုံများတွင်မှိုတက်နေ
May 15, 2020 Bee News 0
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်ကြောင့်ပိတ်ထားရတဲ့ မလေးရှားနိုင်ငံရှိရုပ်ရှင်ရုံအတွင်းမှာရှိတဲ့ထိုင်ခုံ လယ်သာများပေါ်မှာ မှိုတွေတက်နေကြောင်းသိရှိရပါတယ်။western Perak ပြည်နယ်Ipoh မြို့မှ ဓာတ်ပုံဆရာ ရိုက်ကူးထားတဲ့ ဓာတ်ပုံများအရ ရုပ်ရှင်ရုံ၏ ခရမ်းရောင်၊အနီရောင် ထိုင်ခုံများနဲ့ ကော်ဇာများပေါ်မှာ ဖုန်နဲ့ မှိုတွေပြည့်နေတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်။ မလေးရှားနိုင်ငံဟာ ကိုဗစ်ရောဂါကူးစက်ခံရသူပေါင်း 6,742 ယောက်နဲ့ သေဆုံးသူ 109ဦးအထိရှိကာ ယခုလအစောပိုင်းတုန်းက ရောဂါကူးစက်ပျံ့ပွားမှုကိုထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့သော်လည်း ရောဂါကူးစက်မှုအသစ်များဖြစ်ပွားနေတဲ့ […]
ခြေလျင်တောင်တက်သူအမျိုးသမီး ပိုစ့်တင်ဖို့ဓာတ်ပုံရိုက်ရင်း အမြင့် 155 ပေမှပြုတ်ကျသေဆုံး
တူရကီနိုင်ငံဟာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်ကြောင့် ချမှတ်ထားသော Lockdown များကိုအဆုံးသတ်ပြီးနောက် ခြေလျင်တောင်တက်သူအမျိုးသမီးတစ်ဦးဟာ အောင်ပွဲခံဓာတ်ပုံတစ်ပုံအား ချောက်ကမ်းပါးအစွန်းမှာရိုက်ကူးနေစဉ်အတွင်း အမြင့်ပေ ၁၁၅ မှပြုတ်ကျကာ သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ Fox News သတင်းရဲ့ ကနဦးဖော်ပြချက်အရ ကာဇာက်စတန်နိုင်ငံမှ အသက်၃၁နှစ်အရွယ် Olesia Suspitsina ဆိုတဲ့အမျိုးသမီးဟာ သူမရဲ့သူငယ်ချင်းနဲ့ အတူနိုင်ငံခြားခရီးသွားဝင်ရောက်မှုများတဲ့ Antalya မြို့မှ […]
သင်ရွေးချယ်လိုက်တဲ့ မျက်လုံးပုံက ပြောပြပေးမယ့် သင့်ရဲ့လျှိ့ဝှက်ချက် အကြောင်းအရာများ
May 14, 2020 Bee News 0
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွင်းစိတ်ခံစားချက်တွေဟာ အလွန်နက်နဲလှပြီးနှစ်ပေါင်းများစွာ စိတ်ပညာရှင်တွေက နားလည်နိုင်ဖို့အတွက် ကြိုးစားခဲ့ကြရပါတယ်။ ယခုအကြောင်းအရာတွေမှာတော့ သင့်ရဲ့နက်ရှိုင်းလှတဲ့ စိတ်ခံစားချက်တွေ၊ လျှိ့ဝှက်ဆန္ဒတွေနဲ့ ဖိနှိပ်ခံစားနေရမှုတွေကို ထုတ်ဖော်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ အချို့သောသူတွေဟာ မိမိစိတ်ရဲ့အတွင်းပိုင်းခံစားချက်တွေကို မသိရှိကြပါဘူး။ ဒီနေရာမှာတော့ စာဖတ်ပရိသတ်တွေအတွက်စိတ်ပညာရှင်တွေရဲ့နည်းလမ်းတွေနဲ့ စမ်းသပ်မှုလေးတစ်ခု ပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပြီး ဒီအချက်တွေကနေ သင်ဟာဘယ်လိုလူစားမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတာကို ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်သလို သင့်အပေါ်ကို စိတ်ပညာရှင်တွေကနေပြီး ဘယ်လိုသဘောထားသလဲ သင့်ရဲ့ […]
မိတ်ကပ်ပညာရဲ့စွမ်းပကားကို ကျနော်တို့သိရှိပြီးဖြစ်မှာပါ၊ ပရော်ဖက်ရှင်နယ် မိတ်ကပ်ပညာရှင်များရဲ့ ဖန်တီးမှုအရည်အသွေးကလဲ အံ့မခန်းပြောင်းလဲ တိုးတတ်လျက်ရှိပါတယ်၊ တစ်ချို့သော ဇာတ်လမ်းများတွင် ဇာတ်ကောင်စရိုက် ရဲ့လိုအပ်ချက်အရ ဇာတ်ကောင်ကိုပိုမိုပီပြင်အောင် ဖန်တီးဖို့လိုအပ်လာတဲ့အခါမှာ မိတ်ကပ်ပညာဖြင့်ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်၊ ထိုသို့ဖန်တီးလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ မူလဇာတ်ကောင်နေရာမှာ သရုပ်ဆောင်မဲ့ အနုပညာရှင်ဟာ လုံးဝမမှတ်မိနိုင်လောက်အောင် အခြားသူတစ်ယောက်အနေနဲ့ ပြောင်းလဲသွားခဲ့ပါတယ်။ ထိုမိတ်ကပ်ပညာရှင်တို့ဟာ ဆုရဇာတ်ကားများနဲ့ ဇာတ်ကောင်တို့ကိုနောက်ကွယ်မှ အဓိကကူညီပေးခဲ့သူများဖြစ်ကြပါတယ်။ […]